Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.3.1.2 Foana-on
Foana-on tahirin-kevitra lehibe mahatonga ny fianarana ny zava-mitranga tsy ampoizina sy ny tena amin'ny fotoana fandrefesana.
Maro ny angon-drakitra lehibe rafitra foana-on; izy ireo tsy tapaka manangona tahirin-kevitra. Izany foana amin'ny toetra-mpikaroka amin'ny longitudinal manome angon-drakitra (izany hoe, tahirin-kevitra mandeha ny fotoana). Ny hoe foana-on manana fiantraikany lehibe roa ho an'ny fikarohana.
Voalohany, foana-eo amin'ny fanangonana antontan'isa manome fahafahana mpikaroka mba hianatra zava-mitranga tsy ampoizina amin'ny fomba izay tsy azo atao aloha. , Ohatra, ny mpikaroka liana amin'ny fianarana ny Occupy Gezi hetsi-panoherana ao Torkia ao amin'ny antenatenan'ny taona 2013 dia matetika mifantoka amin'ny fitondran-tena ny mpanao fihetsiketsehana nandritra ny hetsika. Ceren Budak sy Duncan Watts (2015) dia afaka manao zavatra bebe kokoa amin'ny fampiasana ny foana-amin'ny toetry ny Twitter mba hianatra Twitter-mampiasa ireo mpanao fihetsiketsehana teo aloha, mandritra, ary rehefa afaka ny zava-nitranga. Ary, izy ireo dia afaka mamorona ny vondrona fampitahana ny tsy mpandray anjara (na ny mpandray anjara izay tsy bitsika momba ilay hetsi-panoherana) teo aloha, mandritra, ary rehefa afaka ny zava-nitranga (Sary 2.1). Amin'ny tanteraka ny taloha nahitana lahatsoratra tontonana ny bitsika ny 30.000 olona ny roa taona. Amin'ny augmenting ny fampiasa matetika angona avy amin'ny hetsi-panoherana izany hafa vaovao, Budak sy Watts dia afaka miana-javatra betsaka kokoa izy; ireo no afaka ny haminavina ny zavatra isan-karazany ny olona dia mety handray anjara amin'ny Gezi hetsi-panoherana sy ny Tombanan'ny ny fiovana eo amin'ny toe-tsaina ny mpandray anjara sy ny tsy mpandray anjara, na ao amin'ny fohy ezaka (mampitaha talohan'ny Gezi ho nandritra ny Gezi) sy ao amin'ny maharitra (mampitaha talohan'ny Gezi mba hamoaka-Gezi).
Sary 2.1: Design ampiasain'ny Budak and Watts (2015) mba hianatra ny Occupy Gezi hetsi-panoherana ao Torkia ao amin'ny antenatenan'ny taona 2013. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny foana-amin'ny toetry ny Twitter, ny mpikaroka namorona ny zavatra niantso ny taloha tontonana izay ahitana lahatsoratra momba ny 30,000 olona nandritra ny roa taona. Mifanohitra amin'ny fanaon'ny fianarana izay mifantoka amin'ny mpandray anjara nandritra ny hetsi-panoherana, ny taloha-post tontonana manampy 1) tahirin-kevitra avy amin'ny mpandray anjara taloha sy taorian'ny zava-nitranga sy ny 2) angona avy amin'ny tsy mpandray anjara teo aloha, mandritra, ary rehefa afaka ny zava-nitranga. Ity ny nampananana harena angona rafitra afaka Budak sy Watts mba haminavina izay karazan-olona mety handray anjara amin'ny Gezi hetsi-panoherana sy ny Tombanan'ny ny fiovana eo amin'ny toe-tsaina ny mpandray anjara sy ny tsy mpandray anjara, na ao amin'ny fohy ezaka (mampitaha talohan'ny Gezi ho mandritra Gezi) ary ao amin'ny maharitra (mampitaha talohan'ny Gezi mba hamoaka-Gezi).
Marina fa ny sasany amin'ireo vinavina mety efa izay tsy nataon-foana amin'ny fanangonana antontan'isa loharano (ohatra, maharitra ny vinavinan'ny ny toe-tsaina fanovana), na dia toy izany fanangonana antontan'isa ho an'ny olona 30.000 no tena lafo vidy. Ary, dia nanome voafetra ny teti-bola, Tsy afaka mieritreritra ny hafa ny fomba izay mamela ny mpikaroka indrindra mba handeha indray ao amin'ny fotoana sy ny mpandray anjara mivantana hitandrina fihetsika tamin'ny lasa. Ny akaiky indrindra dia ny hafa hanangona tatitra momba ny fitondran-tena retrospective, fa ireo tatitra ireo ho amin'ny voafetra granularity sy mampametra-panontaniana marina. Table 2.1 dia manome ohatra hafa ny fampianarana izay mampiasa ny foana-on angona loharano hianatra zava-nitranga tsy nampoizina.
Table 2.1: Fianarana ny fisehoan-javatra tsy ampoizina foana-fampiasana amin'ny angon-drakitra lehibe loharanom-baovao.
tsy nampoizina hetsika
Foana-on angona loharano
Hetsika Bodoy Gezi ao Torkia Twitter Budak and Watts (2015)
Umbrella hetsi-panoherana ao Hong Kong Weibo Zhang (2016)
Tifitra ny polisy ao New York City Atsaharo-ary-frisk tatitra Legewie (2016)
Olona nandray anjara ISIS Twitter Magdy, Darwish, and Weber (2016)
Septambra 11, 2001 fanafihana livejournal.com Cohn, Mehl, and Pennebaker (2004)
Septambra 11, 2001 fanafihana Pager hafatra Back, Küfner, and Egloff (2010) , Pury (2011) , Back, Küfner, and Egloff (2011)
Faharoa, foana-eo amin'ny fanangonana antontan'isa manome fahafahana mpikaroka mba hamokatra tena-potoana refiny, izay mety ho zava-dehibe eo amin'ny toe-javatra izay mpanao politika tsy te-hianatra avy amin'ny fitondran-tena, fa efa misy ihany koa ny mamaly izany. Ohatra, tahirin-kevitra haino aman-jery sosialy dia azo ampiasaina mba hitarihana valin-ny loza araka ny natiora (Castillo 2016) .
Ho famaranana, foana-eo amin'ny angon-drakitra rafitra mahatonga mpikaroka mba hianatra zava-mitranga tsy ampoizina ary manome fampahalalana momba ny fotoana tena-ny mpanao politika. Tsy, na izany aza, fa izany foana manolotra-on angon-drakitra rafitra mahatonga fiovana mpikaroka ahafahany manara-maso ny ela ny ela. Izany no satria maro ny angon-drakitra rafitra lehibe ireo foana miova-ny dingana antsoina hoe mandresy (sampana 2.3.2.4).